Bayer Leverkusen Oo Xiriir La Sameysay Manchester United Xiriirkaasi Oo Ku Saabsan Brandon Williams'
HomeHoryaalka IngiriiskaBayer Leverkusen oo xiriir la sameysay Manchester United xiriirkaasi oo ku saabsan Brandon Williams’
Bayer Leverkusen oo xiriir la sameysay Manchester United xiriirkaasi oo ku saabsan Brandon Williams’
Kooxda weyn ee ka ciyaarta Bundesliga ee Bayer Leverkusen ayaa lagu soo waramayaa inay xiriir la sameysay Manchester United oo ku aadan saxiixa Brandon Williams .
Ciyaaryahanka reer England ayaa ah dooqa sadaxaad marka la eego Luke Shaw iyo Alex Telles oo ku sugan Old Trafford, waxaana loo soo bandhigay inuu amaah ku baxo bisha Janaayo si uu ugu raaxeysto safka koowaad ee kooxda.
Southampton ayaa la fahamsan yahay inay xiiseyneyso heshiiska daafaca bidix, kaasoo kaliya ciyaaray lix daqiiqo oo Premier League xilli ciyaareedkii 2020-21.
Sida laga soo xigtay Sky Sports News , Leverkusen – oo horay loogu qiimeeyay xiisaha Williams – ayaa hadda xiriir la sameeyay United oo ku saabsan heshiiska 20 jirkaan.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa intaa ku dareysa in Leverkusen ay dooneyso inuu si joogta ah ula soo saxiixdo daafaca bisha soo socota ka dib dhaawac muddo dheer uu ku maqnaa amaahda Atletico Madrid Santiago Arias , laakiin United ayaa kaliya dooneysa inay si ku meel gaar ah u fasaxdo bixitaanka Williams.